Momba anay - Hebei Zebung Rubber Technology Co., ltd.
Hebei Zebung Rubber Technology Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2003 ary miorina amin'ny faritra fampandrosoana Jing County, Hebei Province, Sina.
ZEBUNG dia nanafatra 4 andalana famokarana fantsom-panafody indostrialy VP, nampitombo ny tsipika famokarana fantsom-panafody solika an-dranomasina ho an'ny fantsom-by lehibe
ZEBUNG dia nanampy andalana roa famokarana fantsom-pamokarana tsiranoka indostrialy, ary mihoatra ny 20 ny fitaovana fitsapana sy fizahana.
Amin'ny taona 2018
ZEBUNG dia niara-niasa tamin'ny Institute of Ocean Engineering ao amin'ny Oniversiten'ny solika ao China. Tamin'io taona io ihany, araka ny fepetra hentitra takian'ny filankevi-panjakana momba ny fiarovana ny tontolo iainana, dia nanatevin-daharana ny fananganana ny foibe fampifangaroana vaovao.
Amin'ny taona 2020
Zebung dia nankatoavina ny fanamarinana OCIMF-GMPHOM 2009 voamarin'ny BV.
Aorian'ny fivoarana haingana mihoatra ny 17 taona, ZEBUNG dia miasa ho toy ny orinasa mpitarika teknolojia. Ny renivola voasoratra anarana ZEBUNG dia nitombo hatramin'ny 59 tapitrisa, mpiasa mihoatra ny mpiasa 150, mpiasa mpikaroka siantifika 10, injeniera zokiny 3, maherin'ny 120 andiana fitaovana famokarana.
Ny vokatra lehibe an'i ZEBUNG dia: hosotra menaka an-dranomasina be dia be (solika an-dranomasina / mitsingevana, menaka semi-mitsingevana / fantson-tsolika dock / fantsom-pohy STS); fantsom-pitrandrahana savaivony lehibe (fantsona mitsingevana / fantsom-pandefasana dredging fohy); fantsom-pitrandrahana indostrialy - fantsom-pisakafoanana an'ny FDA / fantsom-panafody simika / UHMWPE fantson-tsolika / fantsom-bozaka solika / fantsom-bozaka / fantsom-by / fantsom-bary / fantsona etona / fantson-tsolika solika sns Ny vokatra rehetra dia nahazo BV ISO9001: 2015 fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena. ZEBUNG amin'izao fotoana izao dia nankatoavin'ny mari-pahaizana BV - OCIMF manara-penitra GMPHOM 2009 ho an'ny hosotra an-dranomasina sy fanamarinana FDA.
"Boutique" no fari-piasan'ny ZEBUNG, "Integrity" no vato fehizoron'ny ZEBUNG, "kilasy voalohany" no tanjon'i ZEBUNG, ZEBUNG dia manaraka hatrany ny "fiankinan-doha amin'ny haitao mandroso sy ny talenta hamoronana orinasa amin'ny alàlan'ny fitantanana sy serivisy avo lenta" Miezaka mafy izahay hampiroborobo ny fampandrosoana ny indostrian'ny hosoka ary omeo ny herinay rehetra.